Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Mala haaraa oromoo lafasaarraa ittiin dhabamsiisuudhaaf diinni baafate.
Mala haaraa oromoo lafasaarraa ittiin dhabamsiisuudhaaf diinni baafate.
(Kamaal Aloo Gr irraa)
Akkuma beekkamu diinni ummataa mootummaan TPLF ummata cabseefi barbadeessee akka fedhetti lafaa fi qabeenya dhuunfachuudhaaf gara hedduun yaalaa ture.
Dura dhaabbannaa ummataa sadarkaa woreegama lubbuudhaa hedduu baasiseen godhameen malli saamichaaf isaan baafachaa turan hedduun harkaa fashalayee ture.
Roorroon isaan ummatarratti godhanis hedduu sagaleen ummataa olbayee iyyamee waan alaaf keessaa dhagahameef addunyaanis dhugaa argee beekee hedduu rifatee mootummaan Ethiopia hedduu qeeqamee jira. Hedduus ijji addunyaa irratti buutee jibbamaniiru.
Ummannis guutuu guututti roorroo mootummaa woyyaaneedhaa argee kijibaaf soba isaaniis dhaggeeffachuu didee argame.
Mootummaan woyyaaneedhaa ammoo karaa kamiinuu sobees, ajjeesees, hidhees, biyyarraa ari'ees ,dhiifama sobaas gaafatee mala ittii ummata cabsu hedduu hedduu yaalee ummata cabsuu akka dadhabe eenyummaanuu akka gaaritti argees dhagayaa jira.
Yeroo kanatti woyyaaneen mala haaraa ummata ittiin cabsee dhiitee ukkaamsee ittiin saamaatiin bulchuu qabu baafachuun dirqama itti taate jechuudha. Mala kana ammoo bifa saamichaafi ajjeechaan akkasumas gochi suukaneessaan isaan TPLF ummata keenyarratti geggeessan ifatti woyyaanee ykn harka woraana isaanii agaazii hin fakkaanneen eegalan.
Woraana isaanii fudhatanii ummatoota ollaa ummata keenyaa baroota dheeraadhaaf daangaa ollaa irratti dabree dabree wolitti bu'uu tiranitti qawwee hidhee woraana isaa itti makee ummata keenya nagaadhaa daangaa irra jiraatu irratti lola bane.
Naannoolee oromiyaadhaa kanneen daangaa irra jiran akka Harargee, Booranaa, Baalee, Gujii fi kkf bifa hedduu nama suukaneessu tokkoon fixaa jiru.
Ummata keenyas fixanii qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqisanii qe'eef qabeenya ummataallee humna qawweedhaa bifa jijjiiratee dhufe kanaan dhaalaa jiru.
Ummanni waan danda'u hundaanillee ufirraa qolachaa itti woreegamaatiin saba isaaniitti halkaniif guyyaa iyyachaa jiru.
Yeroo ummanni humna qawweedhaan isaan fixaa jiru dura waan qabuun dura dhaabbatees humna keessaa kan ummanni irra aanee ajjeesee woraqaa isaanii kiisha reeffa woraana diinaatii baasee ilaale akka woyyaaneen jettu san woraana sablammoota ollaadhaa irraa lafaa ka'ee isaan fixaa jiru osoo hin taane woraanuma agaaziidhaattu maqaa ummata ollaatiin bifa jijjiiratee nu fixaa jira jechuu mirkaneessanii jiru.
Haa ta'u malee diinni mala haaraa baafatee ittiin ummata keenna fixaa jiru kanaan ololaafi soba hedduu jabaatee maqaa roorroo kanaa ufirraa achi qabuudhaaf gochaa jiruun hanga takka ittiin milkaayuutti jira natti fakkaata.
Jechuunis yeroo diinni kun bifa kanaan ummata keenya daangaa irra jiru lafarraa haxaayee qe'eef qabeenyallee irraa saamee lafarraa barbadeessaa jiru kanatti nuti ummanni oromoodhaa naannoolee biroo garagaraa jirru caldhisnee ilaaluun kun waanuma olola tplf oofe kanaan sobamnee akka bara dabre wolirratti dhumnee woliif tumsaafi tokko taanee diinaan falmachaa turre sanitti woliif tumsuurraa uf nu qusachiisaa jira fakkaata.
Yeroo kanatti osoo cinaan qaama keenyaa ummanni oromoodhaa daangaa irra qubatu bifa himuunuu ulfaatu tokkoon mala haaraa diinni nutti baase kanaan nyaattamaa jiruu garii qaama keennaa ammoo dubbii kana iyyuufi dirmachuu dhabnee dhaabbannee wolirratti ilaaluu kanatti woyyaaneen hedduu gammaddee jirti. Sababbiin isaas karaalee inni ittiin qoqqoodee nu nyaachuuniif yaale keessaa kan hanga tokko milkaayeef mala haaraa biyya ollaadhaa keessaan dhufee nu nyaachaatiin ufirraa achi qabuudhaaf jabaatee sobuudhaa kana ta'uu waan baraniif jechuudha.
Kanis beeknee gama biroo hedduunis yoo madaalle ammoo boruuf jidduu keenyaatti gadoon hafuufi lubbuuf qabeenya ummata oromoos badii jalaa hanbisuudhaaf osoo dhaabbannee wolirratti hin ilaalin tokkummaadhaan kaanee falmachuun qofti furmaata akka ta'e beekuun hedduu barbaachisaadha.
Malli haaraan woyyaaneedhaa kun ammoo yoo ammaan tokko taanee dura dhaabbachuu dhabne guutuu oromiyaadhaatiifuu hedduu baldhaa guddaa barbadeessu akka ta'u shakkiin hin jiru. Kanas kan ragaa ta'u diinni ummata keenya daangaa irraatti roorrisee qe'eef qabeenya isaa irraa buqqisee erga godaansises biraa hafuu didee iddoo isaan itti jalaa godaananii itti siqanitti jala deemeetuma saamuufi ajjeesuu isaati.
Kanaafuu dhalli oromoodhaa hundi iddoo jiruu ka'ee mala haaraa diinaa fi barbadeeffamuu ummata oromoodhaa daangaa irra jiran kanneen akka Harargee, Booranaa, Baalee Gujiif kkf irratti deemaa jiru kana falmachuu qabna jedheen yaada.
Humnaafi meeshaan oromoon diina duraan dhaabbatee ufirraa ittisuunii tureefi ammas ittiin diina ufirraa faccisuu qabus tokkummaadhaan wolirratti tumsinee woliif iyyinee wolirraa diina ittisuu qofaadha.
Roorroo ummata keenya barbadeessaa jiru kana tokkummaadhaan kaanee falmachuun dirqama ta'ee jiraatii haa kaanu.
INJIFANNOON KAN ABBAA HAQAATI.
~Kamaal Aloo Gr
Posted by Hasan Ismail at 1:51 PM